မဆို Self-လေးစားကုမ္ပဏီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပဋိညဉ်စာတမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပြင်ပန်ထမ်းအမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ အလုပ်အပြင်, တိုင်းအဓိကကုမ္ပဏီအတွက်လူတွေတပြင်လုံးကိုအသင်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောအပေါ်ကော်ပိုရိတ်ပါတီများထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သဘာဝကျကျ, မည်သည့်ဝန်ထမ်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆင်းကိုလောကဝတ်ကိုစောင့်ရှောက်မည်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
တစ်ပါတီနှင့်အတူကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရောထွေးပါနဲ့။ သငျသညျလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့လုံလောက်တဲ့အနီးကပ်များမှာရင်တောင်ကော်ပိုရိတ်ပါတီများမှာသင့်ရဲ့အလုပ် - လျောက်ပတ်ကြည့်ရှုပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သငျသညျပြုပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ပြင်ပကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြသကြဘူးဘယ်လိုတိုက်ရိုက်သင်တို့ဆီသို့စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အချိုးအစားအဖြစ်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ။
ပထမဦးဆုံးဌာန၌တစ်ကော်ပိုရိတ်ပါတီများအတွက်အဝတ်ရွေးချယ်ရာတွင်သောအခါ, နေရာစဉ်းစားပါ။ သင်စားသောက်ဆိုင်မှာရန်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဆိုရင်, တကကော်ပိုရိတ်တခုတခုအပေါ်မှာညနပေိုငျးစားဆင်ယင်ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစံပြ option ကိုဂန္ဖြတ်တဲ့မော်ဒယ်ပါလိမ့်မယ်။ အဖိုးတန်အဆင်တန်ဆာများ၏ပုံရိပ်ကိုဖြည့်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ စားသောက်ဆိုင်ဖို့ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်ပြုလုပ်ရှည်စားဆင်ယင်ဂန္ဝတ်ဆင်ရန်သင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်။
ပါတီရုံးတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်ဆိုလျှင်, အမြတ်အစွန်း option ကိုတစ်ဦး pantsuit တစ်ခုသို့မဟုတ်ဂန္အင်္ကျီနှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့ပေါင်းစပ်နေတဲ့ခဲတံစကတ်လိမ့်မည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကော်ပိုရိတ်ပါတီများအဘို့စားဆင်ယင်အဆိုပါဂန္, အစားတင်းကျပ်ဖြတ်ကြိုဆိုပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့လှပသောဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြည့်စွတ်။ တစ်ဦးမြင့်မြတ်သောထည်များ၏စားဆင်ယင်မှု၏ရိုးရှင်းကြော့ရှင်းအစဉ်အမြဲသင့်လျော်သောကြည့်ရှုမည်။
ဒါ့အပြင်အလုပ်မှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းမမေ့မလြော့ပါ။ ခါးပန်းကကိုက်ညီတဲ့သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ post ကိုအထူးသဖြင့်မြင့်မားတဲ့မပါလျှင်, ထွက်ရပ်ဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မန်နေဂျာအစိတ်အပိုင်းကိုကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
ကော်ပိုရိတ်ပါတီစားဆင်ယင်မှလေးစားမှုနှင့်အတူအချို့သောကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာတင်းကြပ်စွာ mini ကို, နက်ရှိုင်း neckline နှင့်အလျားလိုက်အပေါက်, ပွင့်လင်းအထည်နှင့်ထွန်းလင်း၏များစွာသောခွင့်ပြုမထားပေ။ ပွင့်လင်းပခုံးပိုကောင်းငူသို့မဟုတ် bolero ကိုဖုံးလွှမ်း။
နေ့လည်တင်းကျပ်စွာများအတွက်အဖြစ်ညနေပိုင်းတွင်၏သဘာဝအကသဘာဝအရောင်တစ်မော်ဒယ်ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏, သင်အမှောင်ထဲမှာတင်းကျပ်စွာသို့မဟုတ်ခြေအိတ်အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းကား, ကအားလုံးကိုပါတီကျင်းပသောအခါတစ်နှစ်၏အချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့ကုမ္ပဏီတွေကပင်ဒဏ်ငွေကိုယ်ထင်ရှားတင်းကျပ်စွာပေါ်လာဖို့နွေရာသီယူကြပြီ။
နှင့်အညီ, ကောင်းသောဖိနပ်မှတ်မိ - ကသင့်ရဲ့ image ကိုတဝက်အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ရာအရပ်ကိုကြာခဲ့လျှင်, သင့်အကြိုက်ဆုံးဖိနပ်တရံကိုရောက်စေဖို့သေချာပါစေ။
Golfiny ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
သင်၏မျက်နှာကိုပုံသဏ္ဍာန်များအတွက်နေကာမျက်မှန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - ညာအနားကွပ်မျက်နှာအမျိုးအစားပေါ်
စားဆင်ယင် pin ကို-up,
ပြင်သစ်စတိုင် - မိန်းမတို့အဘို့အဝတ်
အိပ်ခန်းထဲမှာ Plasterboard မျက်နှာကျက်
သငျသညျမသိရာ7အများဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းနှင့်ရှားပါးရောဂါများ,
အဆိုပါ afterparty "ရွှေကမ္ဘာလုံး" ဆုချီးမြှင့်မှာကိုယ်ဝန်ရှိ Miranda Kerr နှင့်အခြားကြယ်များ
ဝတ်လစ်စလစ်မော်နီကာ Bellucci အီတလီ Vanity Fair ၏အဖုံးချီးမြှောက်ခဲ့
အခန်းထဲမှာခရူးရှော့ဖ်ဒီဇိုင်း - သေးငယ်တဲ့အာကာသအတွင်းနှစ်သိမ့်ကို
နိုဒါကိုငံပြာရည် - စာရွက်